Cyclamen | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Kedu ka esi eto cyclamen n'ụlọ
Cyclamen (Cyclamen - site na Grik. Cyclos - gburugburu) - ụlọ nke ndị ezinụlọ ya na-eto eto bụ Primula (Latin Primulaceae). Ala nna nke cyclamen bụ Central Europe na Asia Minor. N'oge na-adịbeghị anya, ndị na-akụ akwụkwọ osisi ahụ achọpụtawo ụdị osisi ọhụrụ ndị dị n'ụsọ Oké Osimiri Mediterenian, Caspian na Black Seas.
Kedu ụlọ osisi ndị kwesịrị ekwesị maka ime ụlọ gị
Ime ụlọ bụ ebe dị ezigbo mkpa nke chọrọ ka ikuku pụrụ iche, nke ịchọrọ ịbanye n'ime ụlọ gị. Ulo, uwe akwa na ngwá ụlọ ndị ọzọ ezughị ezu maka nke a, ị ga-achọkwa ịkụ ụlọ. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe osisi a ga-edebe n'ime ime ụlọ na otu esi elekọta ha.
Gịnị na-enyere cyclamen aka?
Oge oyi na-ewetara ya ọrịa na ọbụna ọrịa ntiwapụ. Anyị aghaghị ịzụta ọgwụ ọjọọ na ụlọ ọgwụ, nke dị oke ọnụ ugbu a. Otú ọ dị, ị nwere ike iji ntụziaka nke nkà mmụta ọgwụ ọdịnala, nke chebere amamihe ruo ọtụtụ puku afọ, ọbụnadị ugbu a, na narị afọ nke ịzụ ọgwụ, jiri mmesapụ aka na-ekerịta ya na onye ọ bụla.